‘पोष्ट कोभिड’को लक्षण कति समयसम्म देखिन्छ ?
धनगढी,१४ असार। कोरोना संक्रमण निको भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिने गरेको छ । संक्रमण मुक्त भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यमा समस्या देखिने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ ।
संक्रमण निको भइसकेपछि कालो ढुसीका लक्षणहरू देखिने, बालबालिकामा मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिन्ड्रोम देखिने, धेरै नै थकाई लाग्ने र धेरै कमजोरी महसुस हुने, सास फेर्न धेरै गाह्रो हुने, निद्रा नलाग्ने, थकान लाग्ने, डिप्रेसन र तनावका लक्षणहरू देखा पर्ने, एकाएक रक्तचाप बढ्ने वा घट्ने जस्ता समस्या संक्रमण निको भइसकेपछि देखिन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्ता लक्षण देखिए तत्काल स्वास्थ्य संस्था जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
कोरोना संक्रमण निको भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यको उत्तिकै ख्याल राख्नु पर्ने र जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
“पोष्ट कोभिड लक्षणहरू १२ हप्तासम्म पनि देखिने गरेको छ । त्यसैले यस्ता लक्षण देखिएमा तत्काल चिकित्सकाको सल्लाह लिनुपर्छ,” मन्त्रालयको आग्रह छ, “कोरोना संक्रमण निको भइसकेपछि पनि जनस्वास्थ्यका सबै मापदण्डको पालना गरौं । भैतिक दूरी कायम गरी बेलाबेलामा साबुनपानीले हात धुनुपर्छ ।”
पिसाब चेपेर त बस्नुहुन्न ! छिट्टै बुढ्यौली निम्त्याउँछ नि